Misolo Tena ny Governemanta Mpanao Famoretana Ao Ethiopia i Tedros Adhanom Kandidà Tale Jeneralin’ny OMS Ho An’ny Mpanohitra · Global Voices teny Malagasy
Misolo Tena ny Governemanta Mpanao Famoretana Ao Ethiopia i Tedros Adhanom Kandidà Tale Jeneralin'ny OMS Ho An'ny Mpanohitra
Voadika ny 09 Mey 2017 4:58 GMT
Vakio amin'ny teny አማርኛ, Português, Español, English
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Minisitry ny Fahasalamana, Ethiopia, niteny tao amin'ny Fihaonana An-tampony mikasika ny Fandrindram-piterahana tao Londra tamin'ny taona 2012. Sary avy amin'ny mpisera Flickr UK DFID. CC BY-SA 2.0
Nanohitra mafy an'i Tedros Adhanom, kandidàn'i Etiopia hisolo an'i Margaret Chan Fung Fu-Chun, ho tale jeneralin'ny Sampan'ny Firenena Mikambana misahana ny Fahasalamana ireo Etiopiana sasany, herinandro vitsivitsy talohan'ny nifidianan'ireo mpikambana ny kandidà telo farany.
Tedros, minisitry ny raharaham-bahiny sy ny fahasalamana Etiopiana teo aloha, miaraka amin’ i Sania Nishtar ao Pakistan sy David Nabarro ao amin'ny Fanjakana Britanika no kandidà tale jeneraly telo voatendry tao anatin'ireo kandidà maro tamin'ny volana Janoary.
Heverina ho mpifaninana voalohany ao amin'ny fifidianana i Tedros, izay manana fanentanana tsara tohana. Tohanan'ny Vondrona Afrikana ny firotsahany hofidiana, ary nahazo fankatoavana avy amin'i Andrew Mitchell, sekreteran'ny fampandrosoana iraisampirenena tao amin'ny Fanjakana Britanika teo aloha izy vao tamin'ny herinandro lasa.
Na izany aza, miatrika fanoherana tsy an-kijanona avy amin'ny olom-pireneny izy .
Manao fanentanana manohitra azy mafy an-tserasera ireo Etiopiana mahatsiaro ho voahilikiliky ny governemanta ao amin'ny firenena, ary milaza fa tsy tokony ho hofidiana izy satria maneho ny tombontsoan'ireo mpitondra mpanao didy jadona ao Etiopia fa tsy ny vahoaka.
Ny zavatra mahatsikaiky tafahoatra ny voina. Mirotsaka hofidiana ho #DGOMS ny olona izay tompon'andraikitra tamin'ny famonoana taranak'olombelona tao #Ethiopia.
Nanangana pejy fanangonan-tsonia an-tserasera manohitra an'i Tedros izy ireo, ary namokatra horonantsary fanadihadiana iray manazava amin'ny antsipirihany mikasika ny zavatra heveriny ho tsy fahombiazany sy ny voalaza fa tsy fahaizany mitantana ara-bola fony izy Minisitry ny Fahasalamana tao Ethiopia .
Nitarika sy nandray anjara tamin'ny tantara ratsin'ny kolikoly lehibe indrindra tamin'ny fanodikodinam-bola tao Ethiopia i Tedros Adhanom.
Nikarakara fanentanana tao amin'ny Twitter izy ireo miaraka amin'ny tenirohy # TsymilaTedroshoaoaminnyOMS mba hanaovana resaka manodidina ny lohahevitra. Nizara fikarohana tamin'ny an-tsipiriany izay miampanga an'i Tedros tamin'ny tsy fahombiazana, tatitra diso, sy ny fanitarana ny zava-bitany tamin'izy nitantana tao Ethiopia ny mpanohitra mba hisarihana ny sain'ny vahoaka mikasika ny mombamomba azy tao amin'ny governemanta Ethiopiana.
Iray amin'ireo sary niparitaka manohitra an'i Tedros, izay mampiseho ny endriny misy X eo akaikin'ireo kandidà roa hafa. Nozarain'ny mpisera Twitter @DahlaKib
Na izany aza, nanao fanentanana manohana ny firotsahany hofidiana ihany koa ny vondron'ny governemanta noho ny tahotra fa mety hampihena ny herijikany ilay fanentanana. Namely ny mpanohitra izy ireo ho toy ny tsy tia tanindrazana, feno haratsiam-panahy, ary kely saina sy be fialonana.
Nanomboka tamin'ny Aprily 2014, nisy hetsi-panoherana malaza nanohitra ny governemanta tao Ethiopia, izay efa novaliana tamin-kabibiana. Olona miisa 800 raha kely indrindra no maty araka ny Mpanaramaso ny Zon'Olombelona. ary mpanohitra ara-politika an'arivony sy mpisintaka an-jatony no nogadraina sy nampijaliana. Nanomboka tamin'ny volana Oktobra 2016, nametraka ny lalànan'ny sivana faran'izay henjana indrindra eto amin'izao tontolo izao ny manampahefana taorian'ny fanambarany ny firenena ho latsaka an-katerena
Ny andraikitry ny politika ara-poko
Nilaza ny sasany tamin'ireo mpitsikera an'i Tedros fa manohitra ny firotsahany hofidiana izy ireo noho ny voalaza fa tsy fahombiazany. Kanefa ny lojikan'ny politika ara-poko no tena ampahany lehibe manosika ny fanoherana mahery vaika an'i Tedros .
Nahazo doktorà tao amin'ny Oniversiten'i Nottingham tamin'ny sampana vondrom-piarahamonina ara-pahasalamana i Tedros . Nianatra biolojia izy tao amin'ny Oniversiten'ny Asmera talohan'ny nahazoany ny mari-pahaizana maîtrise momba ny fitandremana ny areti-mifindra tany Londra.
Rehefa mandre ny anarany ny olona, na dia manam-pahaizana be aza azy dia mampifandray azy amin'ny governemanta mpanao famoretana Ethiopiana izay namono olona, ​​nanagadra mpanohitra ara-politika an'arivony, ary nampiditra am-ponja sy nampijaly mpanohitra maro .
Vetivety izy dia niakatra teo amin'ny fitondrana taoriana kelin'ny nahavitany ny doktorà-ny tamin'ny taona 1999 rehefa nomena ny toerana hitantana ny sampan-draharahan'ny fahasalamana tao amin'ny faritra Tigray. Rehefa afaka roa taona tao Tigray, dia notendren'ny praiminisitra teo aloha Meles Zenawi izay Tigrayana ho minisitry ny fahasalamana tao Ethiopia izy. Tamin'ny taona 2012, lasa Minisitry ny raharaham-bahiny tao Ethiopia i Tedros rehefa maty i Meles Zenawi.
Iray amin'ireo fari-panjakana federaly sivy izay miorina amin'ny rafitra ara-poko sy ny fiteny i Tigray .
Tao anatin'ny 26 taona, ireo Tigrayana sangany no nibahan-toerana tamin'ny raharaha politika tao Ethiopia, indrindra fa eo amin'ny fitantanana ny tafika, ny fiarovana sy ny toe-karena ao Ethiopia. Sahanin'ny Tigrayana sangany avokoa ny toerana ambony rehetra ao amin'ny tafika sy ny filaminana ao amin'ny firenena sy ny toerana manan-danja indrindra ao amin'ny andrim-panjakana na dia tsy misy afatsy 6%-n'ny mponina ao Ethiopia fotsiny aza izy ireo. Mametraka olana hatrany ho an'ireo sangany amin'ny foko Oromo sy Amhara izany, izay mandrafitra ny 65%-n'ny mponina ao Ethiopia .
Nampiasa tetika tsy refesi-mandidy ny governemanta ao Ethiopia mba hamelezana ny vahoakany ary mihidy ny sehatra politika ao amin'ny firenena; na izany aza, misitraka ny fanohanan'ny firenena matanjaka toa an'i Etazonia sy ny Fanjakana Britanika izy.
Fifandirana anatiny eo amin'ny sehatra manerantany
Hita fa niely teo amin'ny sehatra iraisampirenena ny tolona ara-politika Ethiopiana tamin'ny alàlan'ny fanoherana mahery vaika ny firotsahan'i Tedros hofidiana. Milaza ihany koa izany eo amin'ny lafiny sasany fa lasa mpisolo toerana ny sehatra famoretana ara-politika anatiny ireo sehatra manerantany ireo .
Koa satria ny governemanta no mifehy ny andrim-panjakana ara-politika tao an-toerana sy ny fotodrafitrasan'ny fifandraisana dia nanararaotra ny fahafahana hanome fanazavana bebe kokoa momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona tamin'ny alàlan'ny fanentanana tao amin'ny Twitter ireo vondrona am-pielezana, na dia tsy hita firy sy tsy mirindra aza ny ezak'izy ireo.
Misy fanentanana ao amin'ny Twitter anio 28 Aprily tamin'ny 6 ora hariva Ora Eoropeana ary tamin'ny 12 ora atoandro ora Washington DC Etazonia, amin'ny 5 ora hariva ora Britanika, Teny filamatra #TsymilaTedrosaoamin'nyOMS sy #OMSDG